Uhlu lokusatshalaliswa kwamahhala kwesistimu | Kusuka kuLinux
Uhlu lokusatshalaliswa kwamahhala kohlelo
Isaka | | Ukusatshalaliswa, Okufakiwe, I-GNU / Linux
I-SysV Init ithathelwe indawo yi-systemd de facto ekusatshalalisweni okuningi kwamanje kwe-GNU / Linux. Maphakathi kwalolo shintsho, amanye ama-distros asevele ekhethe amasistimu aguquliwe njenge-Upstart ngokuya nge-init daemon, ebikhona ku-Ubuntu, ChromeOS, openSUSE, Debian, Red Hat, Fedora, njll.
Uhlelo olusha luyinkimbinkimbi kakhulu kunezinhlelo ezindala, into ebingahambelani kahle nefilosofi ye-Unix yokusebenzisa izinhlelo ezilula. Ngaphandle kwalokho, iqiniso lokuthi ligcina amarejista kanambambili alithandwanga ngabaningi futhi. Kodwa-ke, kufanele kuthiwe yenze eminye imisebenzi yaba lula nokuthi inezinzuzo zayo. Noma kunjalo, kusacasula abasebenzisi abaningi abasathanda uhlelo lwakudala ...
Kwabo bonke labo abafuna ukubaleka kusistimu futhi banamathele kokudala, kufanele wazi ukuthi kunama-distros amaningi asenalo lolu hlelo. Futhi akuyona i-Devuan kuphela (okuhlukile kwe-Debian ngaphandle kwe-systemd okuthandwa kakhulu).
Lapha ngikukhombisa okuthakazelisayo uhlu lokusatshalaliswa kwamahhala kohlelo:
Devuan: ngokuyisisekelo i-Debian ngaphandle kwe-systemd, ibuyela "emuva emuva" ngalomqondo ukususa abasebenzisi bayo balolu hlelo olusha. Eqinisweni, igama layo livela ekuhlanganisweni kwegama elithi Debian + VUA (Veteran UNIX Admins).
I-Alpine Linux: kungenye yokusabalalisa ngaphandle kwe-systemd ongayithola. Kususelwa kumusl nakuBusyBox, ukuze kube lula futhi kuphephe kakhulu.
I-Artixlinux- Lokhu kujoyina ukusabalalisa okuhlukahlukene okukhona okususelwa ku-Arch Linux. Ukusatshalaliswa okushesha kahle ukuze kusebenze ngokushesha futhi ngaphandle kohlelo.
Akukho lutho: kungenye yalezo zisabalalo ezingavamile. Akuyona imfoloko ekhona, kepha yenziwa kusukela ekuqaleni, ngomphathi wayo wephakeji nokusebenzisa i-SysV init. Kuyindlela enamandla, kepha kungahle kungabi okungcono kakhulu uma ufuna okuthile okulula futhi ungenamava kakhulu. Noma ngabe ufuna ukuzama okuhlukile, kuyindlela enhle.
Slackware: i-classic yama-linuxers "amadala". Enye yezinto ezithandwa kakhulu futhi eziyinkimbinkimbi, kanye ne-Gentoo ne-Arch. Kodwa njengalezi, iguquguquka kakhulu, inamandla futhi inhle kakhulu kulabo basebenzisi abaphambili kakhulu. Kulokhu isebenzisa uhlelo lokubhala oluyinqaba, akuyona i-SysV init, kepha isitayela se-BSD njengaleso esisetshenziswa ngamanye ama-BSD.
I-Gentoo y I-Funtoo: enye ye-distros ebhekiswe kubasebenzisi abanolwazi kakhulu ngenxa yobunzima bayo, kepha iyamangalisa ngokulinganayo. Le distro iyaziqhelelanisa nokusetshenziswa kohlelo I-OpenRC.
I-GUIX: okunye kokwabiwa okususa i-systemd, kuleli cala i-GNU Daemon Sherped isetshenziswa njengohlelo lwe-init. Akuyona i-distro elula ukuyisebenzisa, futhi isebenzisa uhlelo lokuphathwa kwamaphakeji okwenziwayo.
i-antiX Linux: okunye ukusatshalaliswa kwamahhala kohlelo, futhi kususelwa ku-Debian.
I-CRUX: kungenye i-distro esekwe kuzikripthi zesitayela se-BSD futhi ilula kakhulu.
I-PCLinuxOS: Uma uthanda iMandrake distro kuzofanela uzame le foloko egcina i-SysV init.
U-Adélie Linux: iphrojekthi esencane impela ehlose ukuhlonipha izinsika ezintathu eziyisisekelo esekele kuzo: ukuhambisana ngokugcwele kwe-POSIX, ukuhambisana kwamaphrojekthi amaningi, nokuguquguquka.
Obarun: okunye okunye okususelwa ku-Arch, nakho konke lokho okushoyo, kanye nokugxila ekubonakaleni nasekusebenzekeni okulula. Kulokhu, isebenzisa uhlelo olungajwayelekile olubizwa nge-6s esikhundleni se-systemd.
I-KISS Linux: igama layo selivele linikeza umbono wokuthi liyini, okungukuthi, lilandela umgomo KISS. Kungumsebenzi ozimele, owenziwe ngokusuka emthonjeni, ngeBusyBox nohlelo lwayo lokuqalisa.
AMALEGI- Akunakubhekwa njengelinye lama-distros ajwayelekile noma, kepha kumahhala ku-systemd. Kususelwa ku-Gentoo futhi isebenzisa izinketho ezimbili njengokufaka esikhundleni se-systemd: openRC noma s6.
Uma ungenalo ikhono kakhulu ezweni le-Linux noma ungafuni izinkinga, ngincoma lokho uqobo uhlala ngokukhethekile noDevuan… Uma ungumsebenzisi othuthukile noma ufuna ukuzama ezinye izindlela, ukhululekile ukukhetha noma yikuphi okunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Uhlu lokusatshalaliswa kwamahhala kohlelo
Ngicabanga ukuthi kufanele futhi ingezwe kwi-MXLinux ngoba ngokuzenzakalela ayisebenzi nge-systemd, noma iza ifakiwe uma kwenzeka othile edinga ukuqala ngayo, kepha kufanele yenziwe kusuka kuzinketho ezithuthukile zeGrub bese uyiguqula ngesandla ngumsebenzisi.
Ngokwami ​​ngisebenzisa i-Artix ne-OpenRC, ngine-boot ephindwe kathathu nge-Arch (angikayikhiphi okwamanje futhi iyangisiza ukuqhathanisa) ne-Windows 10 yemidlalo.
Ngisebenzisa i-OpenRC ngoba kubonakala ivuthiwe ngokwengeziwe, kulula ukuyisebenzisa futhi kubonakala kimi ukuthi nginekusasa elingaphezulu ngoba kukhombisa ukuthi enye i-BSD nayo izoyisebenzisa.
Into enhle ngokuba no-Artix no-Arch kukhompuyutha efanayo ukuthi ungaqhathanisa ukusebenza, izikhathi zebhuthi, njll. Engingakusho ukuthi i-Artix inika i-Arch ukukhahlela okukhulu kukho konke ngaphandle kokuvalwa kwekhompyutha okushesha ku-Arch. Ngokuvamile konke kusebenza kangcono, ngisho nePlasma iqala ngokushesha okukhulu kusuka kusikrini sokungena ngemvume kuze kuvele ukuvela. ideski. Nginakho okufanayo kuzo zombili kepha uma ngibona ukuthi ngokuvuselelwa ngakunye kwe-systemd Arch kuya ngokuya kuba kubi, ikakhulukazi izikhathi zebhuthi ezidubule kusuka onyakeni ziye kule ngxenye. Kuyiqiniso ukuthi ama-Intel patches (Meltdown, Specter, njll) ayathonya kepha azophinde abe nomthelela ku-Artix futhi umehluko phakathi kokunye mkhulu kakhulu.
Ukubuyekeza okuhle kakhulu futhi ngiyabonga kulokhu kuqhathanisa.
… Ngaphandle kwalokho, engeza i- "Knoppix" ohlwini lokusatshalaliswa ngaphandle kweSystemd. I-distro ephelele kakhulu uma ikhona.
@ unodetantos ngiyabonga ...
uyini umehluko phakathi kokunye futhi yikuphi okuhle kakhulu nokuthi kukuphi izici ezingcono. Ukuphepha?
Afana ncamashi kuyo yonke into ngaphandle kwe-init. Banamaphakeji afanayo, empeleni ama-repos ka-Arch (ngaphandle komgogodla) aku-Artix kepha ngombono wami anjengesipele samaphumulo abo. Ngiyaqonda ukuthi bahlela esikhathini esimaphakathi (uma isikhathi nezinsizakusebenza kukuvumela) ukuba babe nokulawula okuphelele kwama-repos futhi ngenxa yalokho bangabi nawo ama-Arch ekucushweni. Ngicabanga ukuthi lokhu kungenzeka uma beshelela ukuncika ku-systemd (lo ngumbono womuntu siqu) ngoba sebesuse ngokuphelele noma yikuphi okunye okusele kwesistimu, ngeke uthole i-shim noma i-libsystemd-dummy nanoma yini efana nayo.
Ngokuphathelene nokuvikeleka, njengoba kufana ne-Arch, kuya ngokuthi uyivikela kanjani, uzoba nayo, yize ngokungabi ne-systemd, kuqinisekile ukuthi abagcini bama-inits ahlukene baluthatha ngokungathi sína udaba lwezokuphepha kunabantu be-systemd ngakho-ke ngiluthatha kalula. ukuhlala lokho wedwa ngenxa yalokhu kuphephe kakhudlwana.
Ngendlela, ungafaka namaphakeji we-AUR ngaphandle kwezinkinga, ngifake izinkinga ezimbalwa neziro.
Kufanele kushiwo ukuthi uhlelo lwe-init luyi-S6, hhayi i-6S. Endabeni ye-Artix, inikeza izinhlobo ezi-3 ezinama-inits ahlukile: i-openrc, i-S6 ne-runit.
I-SEGA ifuna ukuthola imishini yayo ye-Arcade phakathi kwe- "you-fogs"
Ukukhiqiza okuphezulu: Ungalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lweBrain ngokujulile?